Iwu ahia ohuru: Ego, ma obu ozo | Martech Zone
enweghị ọrụ dara na pasent 8.4 n'August, ka America ji nwayọ na-agbake site na oke ọrịa a na-efe efe.
Mana ndị ọrụ, ọkachasị ndị ọkachamara n'ahịa na azụmaahịa, na-alaghachi na mpaghara dị iche. Ọ dịghị ka ihe ọ bụla anyị hụtụrụla.
Mgbe m sonyeere Salesforce na 2009, anyị nọ na ikiri ụkwụ nke Nnukwu Nlaazu. Echiche anyị dị ka ndị na-ere ahịa na-emetụta mmetụta akụ na ụba akụ na ụba nke mepụtara n'ụwa niile.
Oge ndị a bụ oge tara akpụ. Mana ọ dị ka ụwa anyị niile agbanweela.
Taa, ka ụlọ ọrụ na-agbada ma na-agbanwe ihe onwunwe, ndị otu na-enwe nrụgide karịa mgbe ọ bụla ịchụ ego. N’adịghịkwa ka 2009, ụwa ọ bụghị otú ahụ ka ọ dị n’ọnwa Febụwarị. Site n'echiche dị mma, usoro mmetụ dị elu nke ejirila akụkọ ihe mere eme iji mechie azụmahịa - dị ka ihe omume, ntụrụndụ na nzukọ mmadụ na-adịkwaghị.
N'otu oge ahụ, ọnụ ahịa ahịa ka na-eme. Mgbe ị bụ ụlọ ọrụ B2B, ikekwe ndị VC na-achọsi ike na-akwado, ịnweghị ike iwere mulligan na 2020. needkwesịrị ịchọpụta ya.
O doro anya na nke ahụ pụtara na onye ọ bụla nọ n'otu nzukọ na-ahụzi maka ego ha nwere n'ụdị ma ọ bụ n'ụdị ejiji. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka ndị na-ere ahịa, bụ ndị a ga-ejide ugbu a na nyocha a na-enwetụbeghị ụdị ya iji chụọ ROI. Nke ahụ ga-agbanwe nhazi ihe nhazi maka ọdịnihu.
Agba nke atọ nke ire ere
Oge maka nkuzi ihe akuko ngwa ngwa: Uzo nke ire ahia egosiputa ihe oriri nke mgbasa ozi. Ebe ọ bụla ndị ahịa nwere ike iri mgbasa ozi, ndị na-ere ahịa echepụtala ụzọ ha ga-esi jiri mgbasa ozi ahụ dọta uche ha.
Ihe nile malitere site na oge mbu nke ahia ahia, nke m choro ikpo ya Mad Men Oge. Oge agha a na-agbanye agha kpamkpam site na okike - ma dị oke ọnụ - ịzụta zụrụ. Ọkaibe nyocha na nha adịchabeghị, ma chọpụta na ọganiihu na-adaberekarị na nsogbu nke netwọkụ nwoke ochie dịka ọ dị irè. Ochie ochie nke "ọkara nke mgbasa ozi etinyela n'iyi, anyị amaghị nke ọkara" etinye n'ezie ebe a.
Mgbe ahụ ịntanetị bịara. Na Ina-Gen Oge, ma ọ bụ Oge 2 nke Ahịa. malitere na mmalite nke narị afọ nke 21. Nke a meghere ọnụ ụzọ nke ọwa dijitalụ nke mepụtara nzaghachi ozugbo na njide data, na-enye ndị ahịa ohere ịtụ mmetụta nke ọrụ ha n'ụzọ ọhụrụ.
Nke a webatara ụwa ọhụrụ nke ịza ajụjụ, na-eduga na nhibe nke ọrụ CMO na ikike nke olulu ịzụta. N'ime afọ 20 gara aga, anyị / b nwalere pịa ọ bụla, lee ma kesaa, ịmegharị mkpọsa maka arụmọrụ kachasị.
Mgbe ahụ, anyị nyefere ndị ahụ na-eduga ahịa iji mechie azụmahịa ahụ.
Post-COVID, ụbọchị ndị ahụ gafere. Ire ahia enweghi ike igbusi onwe ya ozo. Ndị na-ere ahịa adịghị emechi ndị ahụ na mmadụ. Methodszọ mmetụ dị elu agafeela ruo oge ọzọ.
Ikekwe nke kachasị mkpa, atụmanya anaghị eche ka ihe mezie tupu ha azụta ihe. Ha na-enwe nrụgide ka ukwuu, nke ahụ pụtakwara, ọ bụrụ na ha na-eme nchọgharị na ebe nrụọrụ weebụ gị na 3am na-achọ ịbanye na ngwọta n'otu izu ahụ, ịkwesịrị ịnọ n'ihu ha, na ozi ahaziri iche nke nwere ike imechi azụmahịa ahụ.
Nke a bụ oge 3 nke Ahịa, ebe onye ahịa, ọ bụghị akara, na-ekwupụta mgbe ịzụrụ ihe. Emeelarị na B2C, ebe ị nwere ike ịzụta ihe ọ bụla n'oge ọ bụla. Kedu ihe kpatara B2B kwa? Ọ bụ ohere dị mkpa maka ngalaba azụmaahịa iji bulie ma nwe oke mmiri, ọ bụghị naanị maka azụmaahịa ọhụụ, kama na mmeghari ohuru na mmụba.
Maka ndị na-ere ahịa, nke a bụ ọnọdụ imi mmiri ma ọ bụ ọnọdụ igwu mmiri, na ihe ọ pụtara doro anya: Nabata ego ha nwetara ugbu a, ma ọ bụ ịkwado ihe egwu dị na ahịa.
Ego ha ga enweta, ma obu ndi ozo
Anyị eruola ebe a na-ama jijiji maka CMO: you nọ n'ọrụ ire ahịa, ka ị bụ onye ọgbọ?
Ọtụtụ CRO ga-ekwu nke mbụ. Ogologo oge ejirila usoro dị nro dịka mmata, clicks na ndu, ebe otu ndị ahịa na-adị ndụ ma nwụọ site n'ikike ha nwere iti kwa ọnwa.
Nke ka njọ, ụfọdụ CRO nwere ike gbagwojuo ya anya site na mbọ ahịa. Gịnị ka mgbasa ozi telivishọn mba ahụ ga-eweta n'ezie? Uzo ole ka ndu ndi ahu gha azulite? Ọ bara uru ịkwado ihe omume ahụ na-eme eme?
Ihe ndị a bụ mkparịta ụka nke ọtụtụ ndị na-ere ahịa anaghị eji enweta ego ha na-enweta. Ma ha ka mma ịmalite inwe ahụ iru ala. Na ire ahia na ire ahia adighizi aga njem nke aka ha, ma na ekerita otu ebumnuche nke ego ha na enweta, enweghi ohere maka siloes ozo. Ngalaba abuo ahu abughi nani maka ahia ohuru, kamakwa maka ijigide, na iwepu ndi ahia ugbua. Eziokwu bụ na otu egwuregwu ahụ chọrọ nka na nghọta nke onye ọzọ nyere.
The Ego Ego bụ banyere ịdepụta ndụ ndụ zuru oke ma na-achọpụta otu ụzọ ọ bụla, n'agbanyeghị ebe o si abịa. Nweghị ike ịdabere na ndị ahịa n'ogologo ndụ niile belụsọ na ịnwe nnweta, njikọ aka, mmechi na data niile n'okpuru otu ụlọ.
Na ngwụsị nke ụbọchị, ọ bụ ndị ahịa ahịa kwesịrị iteta ma nụ kọfị. Ndị na-eme ka mbọ ha niile nweta ego ga-enweta oche na tebụl. Ndị na-eme adịghị ga-ma na-akpọrepu n'ime ahịa ngalaba, ma ọ bụ na ha ga-dusting kwụsịrị ha malitegharịa.
Tags: onye isi ahiaonye isi ngalaba na-ahụ maka ego na-akpataCOVID-19crochọrọ ọgbọokirikiri ndụmarketingoge ahia
Tricia Gellman bụ CMO nke nwayọọ, Inweta ego osooso n'elu ikpo okwu. 3x CMO (nke bụbu Checkr na Salesforce Canada), Tricia bụ onye edemede nke CMO 3.0 akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa, na onye ọbịa nke CMO Mkparịta ụka Podcast.